Ujeedada AWS & Faa'iidooyinka
Kobcinta kobcinta shaqada iyo helitaanka shaqo sare oo lacag leh.
Waxaad heli doontaa fursado badan oo shaqo oo aad ku gaari karto hadafkaaga.
Kobaca ugu sareeya ee xirfadaha leh xirfadaha xirfadaha IT-ga sareeya.
U qalqal qabta shahaadadaada teknoolajiyada "Virtualization technology" ee loogu talagalay kobaca suuqa shaqada
Baro AWS oo hogaamin mustaqbalka.
Hagaajinta CV-gaaga si aad u soo dhaweyso, Codso wareysiyo shaqo oo sax ah iyo mid sare.
Dhismaha AWS (Amazon Adeegyada Web) Koorsada tababarka waxaa ku jira fikradaha farsamo ee dhisidda kaabayaasha AWS. Koorsadu waxay ujeeddadeedu tahay inay baraan macmiilaha xalinta sida ay u isticmaali karaan dariiqa AWS iyagoo isticmaalaya adeegyada AWS. Ka-qaybgalayaashu waxay kaloo baran doonaan hababka naqshadeynta naqshadeynta & AWS ee dariiqooyinka ugu fiican ee loogu talagalay qaabeynta iyo wax-ka-beddelidda teknooloojiyada IT (Teknolojiyada Cusub).
Raac habdhaqanka AWS ee habka ugu fiican iyo mabaadiida lagu talinayo in lagu sameeyo go'aamooyinka kaabayaasha IT.
Dhismuhu wuxuu noqon karaa mid la isku haleyn karo oo la isku haleyn karo oo loo adeegsan karo adeegyada AWS.
Hirgelinta sifooyinka adkaysiga iyo dabacsanaanta ee kaabayaasha IT-da adoo adeegsanaya adeegyada AWS.
Yaree kharashaadka & hagaajinta waxqabadka adoo samaynaya xalinta kaabayaasha AWS ku salaysan si aad u waxtar badan.
Isticmaal Qaababka Fudud oo Fudud leh si loo hagaajiyo naqshadaynta IT-da ee AWS
Tababarka Tababarka Aws Technical
AWS(Amazon WebAdeegyada)Koorsooyinka Farsamada Muhiimka ahITS(Innovative Technology Solutions) wuxuu ujeedkiisu yahay inuu barto ka qaybgalayaasha alaabooyinka, adeegyada iyo xalalka caadiga ahAmazon WebAdeegyada Waxay ku siinaysaa aasaaska si aad u noqoto mid aad ufiican si loo ogaado adeegyada Amazon Web Services si aad u gaarto go'aamo ku saabsan habka IT-ga oo ku saleysan shuruudaha ganacsigaaga iyo inaad bilowdo inaad ka shaqeyso AWS.
Baro fikradaha aasaasiga ah ee naqshadeynta naqshadeynta xogta.
Fahmaan fikradaha iyo terminology ee la xiriira mashruuca AWS
Baro sida loo isticmaalo & loo isticmaalo AWS Management Console.
Maaraynta Aqoonsiga iyo Maareynta Helista (IAM) & Hirgelinta hababka amniga ee AWS.
Isticmaal adeegyada adeegyada kaabayaasha, oo ay ku jiraanAmazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon VPC (Cloud Private Private Cloud), Iskudhafka Awoodda, Kursiga Dhererka (ElB) iyo Amazon S3 (Adeegga Kaydinta Kaydka).
Liiska Koorsooyinka Shahaadada AWS
1 ARAGTIDA AWS TABABARKA View More
2 AWS TECHNICAL TECHNICAL TECHNICAL DEVICES TECHNICAL
Waxaa loo diyaariyey shuruudaha baahida badan
Awoodda amniga oo buuxda si loo buuxiyo shuruudaha ammaanka ee ugu baahida badan.
Xakamaynta hantida, xisaabinta iyo aqoonsiyada ballaadhan ee ballaadhan. maxaan ugu wanaagsanahay macaamiisheena ugu fiican?
Sameynta dhismayaasha IT-ga ee sii kordhiya dhismahaaga dhismaha ee daruuraha.